Muqdisho ma sii noqon kartaa Caasimad Soomaaliyeed? | allsanaag
Muqdisho ma sii noqon kartaa Caasimad Soomaaliyeed?
Si Bulshada Soomaliyeed ee Muqdisho ku nool loo badbaadiyo waa in Caasimadda la geeyaa magaalo kale oo Soomaaliyeed.
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cabdirixmaan Cumar Cusmaan oo ku fashilmay in uu wax ka qabto foolxumada ka socota caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, ayaa Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka ka dalbaday ballaarinta Sohdimaha ay Muqdisho leedahay.
← Muhiimadda a ay leedahay in la dhiso illaha dhaqaalaha Qalbi dhaagax oo soo habaabay →